सुत्नु अघि भुलेर पनि नगर्नुस यी काम, पछुताउनु पर्ला ! « Deshko News
सुन्दा समान्य लाग्ने कतिपय कुराहरुमा ख्याल नगर्दा त्यसले ठुलो असर पार्न सक्छ स्वथ शरिरका लागी आरामदायी र पर्याप्त निन्द्रा को आवश्यकता पर्दछ । अस्तव्यस्त दैनिकिले गर्दा धेरै मानिसहरुको न दिन राम्रो न रात राम्रो भइरहेको हन्छ । विभिन्न उपयोगी जानकरीहरु पस्कने क्रममा आज हामी जानकारी दिँदै छौ सुत्नु भन्दा अगाडि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा यो अति उपयोगी जानकारी मुलक सामाग्रीलाई धेरै भन्दा धेरै साथिहरुको विचमा पुर्याउन सेयर गर्न नभुल्नु होला ।
भोकै सुत्न जानु राम्रो हुदैन । पेट भोको भयो भने निद्रा लाग्दैन, सुत्नु भन्दा अगाडि धेरै पानी पियो भने पनि पिसाव लागेर उठ्नु पर्ने हुन्छ ।
नियमित शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ र निद्रा पर्न पनि सहयोगी हुन्छ तर एकदमै वढी शारीरिक व्यायाम भने गर्नु हुँदैन ।
लेख्ने, पढ्ने वा कम्प्युटरमा काम गरी राख्नु भएको छ भने सुत्नु भन्दा पहिले करिव आधा घण्टा जति काम गर्न छोड्नुहोस र रिल्याक्स गर्नुस् ।
सकभर निद्राको लागि औषधी प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ। औषधी प्रयोग नगरी नहुने भए एक हप्ता वा त्यो भन्दा वढीको लागि प्रयोग गर्नु हुदैन ।
एउटै समयमा सुत्ने भन्नाले एकदम घडी मिलाउनु भने पर्दैन, भनौ १० वजे सुत्ने प्लान छ भने आधा घण्टा अघि वा आधा घण्टा पछि हुँदा फरक पर्दैन तर कहिले १० वजे कहिले १२ वजे वा कहिले १ वजे सुत्न लाग्यो भने सुत्ने नियमितता विग्रिन्छ। धेरै मानसिक तनाव भएर वा विभिन्न रोग लागेर निद्रा नलागेको हो भने तनाव घटाउने र रोगको उपचार गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । –एजेन्सीको सहयोगमा
शरीरमा भिटामिनको कमी हुँदा आँखा कमजोर,यी खानेकुरा खानुस्
भिटामिन : शरीरमा भिटामिनको कमी हुँदा आँखा कमजोर हुन्छ । आफ्नो आहारमा भिटामिन ए, बी,
गर्मी महिनामा पसिना गन्हाउँछ ? यसो गर्नुहोस्
गर्मी महिनामा शरीरबाट धेरै नै पसिना आउँछ । पसिना छालाको भित्री पत्रमा रहेको ग्रन्थीबाट बन्छ
अनुहार चम्काउन मानिसहरु सौन्दर्य प्रसाधनमा हजारौं खर्च गर्छन्। ब्युटी पार्लर धाउँछन्। तर कतिपय यस्ता सामग्रीले